I-'Hut' e-Halfway House - I-Airbnb
I-'Hut' e-Halfway House
Iqhugwane ibungazwe ngu-Lucie
U-Lucie Ungumbungazi ovelele
Indawo yokushicilela eyisakhiwo sodumo i-Halfway House, inendawo yayo yokuziphekela ngaphakathi engadini ye-pub. Edume ngama-ales ayo angempela nokudla okuhle kwenhliziyo. I-'Hut' iyindawo ekahle yokuhlala yekhefu elifushane. Igumbi linikeza ukungena kwalo, ikhishi, umbhede we-Kingsize, ilineni elimhlophe qhwa, igumbi lokugezela le-en-suite, i-TV kanye neziphuzo zasekuseni ezihambisanayo. Ungajabulela ukudla nathi e-The Halfway House kwamakhelwane, sampula ama-ale ambalwa wangempela futhi uye ku-'Hut' yakho.
I-Halfway House iyiphabhu yangempela ye-rustic enesitezi esigqokwa bushelelezi ngenxa yokunyathelwa yizizukulwane zabaphuzayo, iphunga elincanyana lentuthu yezinkuni ezivela eziko kanye nephunga elimnandi lokupheka ekhaya elivela ekhishini. Jabulela ukuhlala ngaphandle engadini ebiyelwe ngosuku lokushona kwelanga, enamatafula namabhentshi ukuze uphumule futhi ujabulele.
Indawo yokucima ukoma inikezela ngokukhethwa okuhle kwamabhiya, ama-ales nama-cider adwetshwe ngokuqondile emgqonyeni kanye nemenyu yokudla kwangempela okunenhliziyo ekhaya. Ngokulandela abalandeli abazinikele abavela esigodini nasekuqhubekeleni phambili nenkundla, isimo sobungani sigcwele izingxoxo nokuhleka ikakhulukazi emicimbini evamile. Uzozwa nomsindo wenja ehona ngezikhathi ezithile ekhoneni, ngaphandle kwe-jukebox enomsindo noma i-TV.
4.71 out of 5 stars from 176 reviews
4.71 · 176 okushiwo abanye
Sisenhlizweni ye-Somerset ephuma nje ku-A303 usuka eLondon uya e-Exeter. Kunezindawo eziningi ongazivakashela endaweni usuka eGlastonbury, Wells, Cheddar Caves, Bruton.
Indawo yokuphuzela utshwala ivuliwe
Amahora wokuvula we-Pub
Msombuluko - NgoLwesihlanu 11.30am - 3pm 4pm - 11pm
Sat - Sun ivula usuku lonke 11.30am - 11pm
ULucie Ungumbungazi ovelele